Imveliso yehypermarket-Etagtron, Inc.
Amasango okhuseleko afakwe ekungeneni kwevenkile, ubungakanani besango bumiselwe kububanzi bokungena kunye nohlobo lwesango.
Uya kusetyenziswa eyiphi ithegi okanye ileyibheli?
Ihloboiimpahla, Ilaphu elikhanyayo njengelokhwe, izikethi, iisuti, i-T-shirt, i-Etagtron ibonelela ngokhuseleko nge-pin encinci ye-16mm okanye eyenziwe yabakhusela. Ngokukodwa kwilaphu lesilika, usebenzisa ithegi ye-Etagtron ene-lanyard ngeqhosha, okungcono ukukhusela umonakalo.
Iingcebiso: Faka izikhonkwane ngezambatho emva koko ubeke iithegi. Ungaze unyanzele ipini kwiithegi.
Ubusika iimpahla, i-Etagtron ikwanokubonelela ngethegi yokhuseleko ngepini ende okanye ithegi eyenziwe yenkomo yokukhusela ezantsi.
I-Etagtron ibonelela ngeentlobo ezininzi zeethegi ukukhusela iintlobo zezihlangu.
I-Etagtron inikezela ngethegi yeewayini yeebhotile zokhuseleko ezahlukeneyo, ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo.
Xa ususa iithegi, sebenzisa nje ukususa ngombane.
Izinto zokubhala Iimpahla zeMidlalo
I-Etagtron inokubonelela ngeethegi zesigcawu ezahlukeneyo kwaye ikhuselekile ukukhusela iimpahla ezibizayo.
Iingxowa kunye neLuaage zezinto zexabiso eliphezulu, zihlala zisebenzisa iithegi zokuzazisa ukuze ziqonde ukhuseleko. I-Etagtron ibonelela ngeentlobo ezininzi zeethegi zobuqhetseba bokuzithelekisa neebhegi kunye nokukhuthaza umfanekiso wegama lakho.
Ileyibhile yeRF ilungile kwitshungama, okanye ukutya okuncinci, kwaye sinokunika ileyibhile enekhowudi yedummy, ekungafumaneki lula kuyo, ikwaneleyibhile yeRF engumkhenkce 40 * 40mm yokutya okungumkhenkce.
Ungasusa njani iithegi okanye ucime iilebheli?
Emva kokuhlawulwa, ungasusa olu khuseleko kumanqaku kunye nesichasi sethu okanye isixhobo esingasebenziyo.
Ubungakanani be-detacher okanye i-deactivator buxhomekeke kubungakanani bedesika yekheshi.
Sebenzisa i-magnetic detacher ukususa i-tag ye-magnetic lock.Ileyibhile, kukho i-deactivator yokwenza degaussing.